FAAFAAHIN: Ma Taqaan kooxaha ugu Imaatinka Badan wareegga 8-da CL, Gooldhaliyeyaasha iyo wax walba oo Wareeggan ku saabsan?
Sunday, June 24th, 2018 - 17:49:06
Tuesday April 11, 2017 - 08:19:58 in Wararka by Kubad Bile
Leicester City ayaa noqotay Kooxdii 132-aad ee soo gaartay wareega Sideed dhamaadka ama Rubuc dhamaadka Champions League sanadkaan halka Real Madrid ay ka soo muuqan doonto markii 34-aad ee taariikhda wax walbo oo aad uga baahantahay inaa ka ogaataa tartanka ayaan halkaan idinkugu haayaa.
Leicester City socodkeeda ayaa ka dhigaayo inay noqotaa Kooxdii 132-aad ee ka soo muuqatay Koobkaan laga soo biloowaa tan iyo markii la bilooway Koobkaan oo magaciisa uu ahaan jiray European Cup 1955/56-dii halka Real Madrid ay tahay markii 34-aad ay imaaday Rubuc dhamaadka.
Hadaba sidee ayay u kala sareeyaan dalalka, Kooxaha iyo laacibiinta.
FG: Ma jirin wax loo diiwaan galiye ciyaartooyda intii u dhaxeeysay 1991/92 iyo 1993/94 maadama kaliyah waxaa la diiwaan galiye Kooxaha sanadahaas laakiin laacibiinta lama diiwaan galin sababo jiray aawgeed.
Sida ay naadiyada ugu soo muuqdeen Rubuc dhamaadka Champions League.
34+ Real Madrid
28+ Bayern München
12 Ajax, Internazionale Milano
Kooxaha ugu badan ee guuleestay markii ay heerka rubuc dhamaadka imaadaan.
11 AC Milan, Juventus
8 Ajax, Benfica, Internazionale Milano
Rubuc dhamaadka Kooxaha heesto iskoorka ugu heerka sareeyo dhanka cabirka 100 % oo intii ay ciyaareen guuleesteen iyo kuwa xigo sida ay u kala sareeyaan.
100% Hamburg, Leeds United (W3 L0)
81.8% Real Madrid (W27 L6)
77.8% Barcelona (W14 L4)
Dalalka ay Kooxaha kala duwan ay mataleen markii heerkaan la joogo. FG: Dalka Germany markii uu labada wadan ahaa ayaa ku jirto.
Ciyaartooyda ugu safashada badan wareega rubuc dhamaadka abad.
21 Ryan Giggs (Manchester United), Xavi Hernández (Barcelona)
18 Andrés Iniesta (Barcelona)
17 Paolo Maldini (AC Milan), Raúl González (Real Madrid/Schalke), Clarence Seedorf (Ajax/Real Madrid/Internazionale Milano/AC Milan)
16 David Beckham (Manchester United/Real Madrid/Paris Saint-Germain), Iker Casillas (Real Madrid), Frank Lampard (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Gary Neville (Manchester United), Cristiano Ronaldo (Manchester United/Real Madrid), Paul Scholes (Manchester United), Edwin van der Sar (Ajax/Manchester United)
Ciyaaryahanka ugu goolasha badan iyo sida ay u kala sareeyaan. Waxaa ugu sareyo Cristian Ronaldo.
15 Cristiano Ronaldo (Manchester United/Real Madrid)
10 Lionel Messi (Barcelona), Raúl González (Real Madrid/Schalke)
9 Paco Gento (Real Madrid), Filippo Inzaghi (Juventus/AC Milan), Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv/AC Milan/Chelsea)
8 Amancio Amaro (Real Madrid), José Augusto (Benfica), Frank Lampard (Chelsea)
Dalka ugu safashada badan heerkaan waa Spain balse yaa ku soo xigo yaase u saftay dalalkaas. FG: Germany mar kale waxaa jirto inuu labo dal ahaa waqtigii hore sidaas darteed sadaxaad ayuu soo fariistay.
75 Spain (Real Madrid 34+, Barcelona 19+, Atlético Madrid 9+, Valencia 4, Deportivo 3, Villarreal 2, Athletic Club 1, Málaga 1, Real Sociedad 1, Sevilla 1)
62 England (Manchester United 18, Liverpool 13, Chelsea 9, Arsenal 7, Leeds United 3, Aston Villa 2, Nottingham Forest 2, Tottenham Hotspur 2,
Manchester City 1, Everton 1, Derby County 1, Burnley 1, Wolverhampton Wanderers 1, Leicester City 1+)
62 Germany* (Bayern München 28+, Borussia Dortmund 8+, Borussia Mönchengladbach 3, Hamburg 3, Schalke 3, Bayer Leverkusen 2, Dynamo Berlin 2, Dynamo Dresden 3, Köln 2, Carl Zeiss Jena 1, Eintracht Braunschweig 1, Eintracht Frankfurt 1, Kaiserslautern 1, Victoria 91 1, Nürnberg 1, Werder Bremen 1, Wismut Aue 1, Wolfsburg 1)
50 Italy (Juventus 17+, AC Milan 15, Internazionale Milano 12, Roma 3, Fiorentina 2, Lazio 1)
31 France (Monaco 5+, Paris Saint-Germain 5, Lyon 4, Bordeaux 3, Marseille 3, Reims 3, St-Étienne 3, Nice 2, Auxerre 1, Nantes 1, Strasbourg 1)
25 Portugal (Benfica 17, Porto 7, Sporting CP 1)
24 Netherlands (Ajax 12, PSV Eindhoven 7, Feyenoord 3, FC Amsterdam 1, Sparta Rotterdam 1)
11 Ukraine*** (Dynamo Kyiv 8, Dnipro Dnipropetrovsk 2, Shakhtar Donetsk 1)9 Austria (Rapid Wien 4, Austria Wien 2, Wiener SC 2, Wacker Innsbruck 1)
8 Sweden (IFK Göteborg 4, Åtvidaberg 1, Djurgården 1, IFK Malmö 1, Malmö FF 1)7 Poland (Legia Warszawa 3, Górnik Zabrze 1, Ruch Chorzów 1, Widzew Łódź 1, Wisła Kraków 1)
7 Turkey (Galatasaray 5, Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1)6 Bulgaria (CSKA Sofia 6)
6 Switzerland (Grasshoppers 2, Zürich 2, Basel 1, Young Boys 1)5 Romania (Steaua Bucureşti 3, Dinamo Bucureşti 1, Universitatea Craiova 1)
Muhiim ah inaa ogaataa:
*Halka xidig aad arkeeysaan waa in West Germany iyo East Germany.
**Labada xidig hadii aad aragtaan waa kooxihii matalay Yugoslavia.
***Labo xidig waa Kooxihii hore u matalay Soviet Union.
****. 4 xidig waa Kooxihii ka soo muuqday ayagoo matalaayo Czechoslovakia.
Calaamada ku dar + hadii aad aragtay waa in 2016-17 ay ku jiraan tartankaan.